AL-SHABAAB oo meel xun sii gaarsiiyay Xiisada Puntland & Galmudug kadib duqeyntii…. | Kismaayo24 News Agency
AL-SHABAAB oo meel xun sii gaarsiiyay Xiisada Puntland & Galmudug kadib duqeyntii….
Thursday September 29, 2016 - 8:23 under Somali News by Tifaftiraha K24
iyadoo aad loo hadalhayo duqeyntii ciidanka Mareykanka duleedka Magaalada Gaalkacyo ku laayeen Ciidanka Galmudug Puntland-na ay shaacisay in duqeeyntaasi lagu laayay maleeshiyaadka Al shabaab ayaa xiisadaasi waxaa dib kusii shiday kooxda Al shabaab.
Kooxda Al-shabaab oo ka jawaab celineysa haddalka Puntland ayaa sheegtay in deegaanka Jeexdan aysan ku laheyn wax saldhig ah, isla markaana uu been abuur yahay hadalka kasoo yeeray maamulka Puntland.
Al-shabaab waxa ay sheegtay in goobta la duqeeyay iyo goobo ku dhowba aysan weli ka sameysan xerooyin, hayeeshee weerarka uu ahaa mid si kas ah loogu qaaday Galmudug.
Al-shabaab waxa ay sheegtay in Duqeynta ka hor nawaaxiga saldhiga ay ku wada dagaalameen Ciidamo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland, iyadoona wax yar ka dib iska hor’imaadka labada dhinac diyaaradaha Mareykanka ay duqeeyeen Saldhiga maamulka Galmudug.
Al-shabaab waxa ay sheegtay inaanu wax lug ah ku laheyn wixii ka dhacay deegaankaasi, waxa ayna dagaalka iyo duqeyntaba ku sheegen inuu ahaa mid u dhexeysay Puntland, Galmudug iyo Mareykanka oo garab boodaayay maamulka Puntland.